Ixesha leKosmo: Yenza imisebenzi eGcina ixesha kwiKhalenda yakho | Martech Zone
Ixesha leKosmo: Yenza imisebenzi eGcina ixesha kwiKhalenda yakho
NgoLwesithathu, Novemba 18, 2020 NgoLwesithathu, Novemba 18, 2020 Douglas Karr
Njengeqabane kwiarhente esebenza neenkampani zeshishini, iintsuku zam ziyinto engacacanga kwaye ikhalenda yam kukungaziphathi kakuhle kwintengiso, kwisicwangciso-qhinga, ukuma, kumaqabane, nakwiintlanganiso zamaqabane ezingayeki. Phakathi kwazo zonke ezo mnxeba, kuya kufuneka ndenze owona msebenzi ndizibophelele kuwo nabathengi, nawo!
Inye into endiyenzileyo ngokwam ngaphambili yinto elula ixesha livaliwe kwikhalenda yam ukuqinisekisa ukuba ndiyayigqiba imisebenzi yam kwaye ndinxibelelane nabathengi bethu. Xa ibhloko yam isiza, ndijonga iphepha lam elithembekileyo kwaye ndiqala ukunkqonkqoza imisebenzi ebalaseleyo.
Ixesha loLawulo lweXesha
Ixesha leKosmo luhlelo lokusebenza lokulawula ixesha olunceda iingcali ukuba zenze umsebenzi ngokubeka imisebenzi kwikhalenda ngezinto ezinokuphazamisa ngokuzenzekelayo. I-KosmoTime ikhonkco elilahlekileyo phakathi kokwenza umsebenzi wakho, ukulungelelanisa loo msebenzi nekhalenda yakho, kunye nokuqinisekisa ukuba akukho ziphazamiso ngelixa uzifeza.
Batch Imisebenzi yakho -Imisebenzi ihlala inyathelo elincinci kwiprojekthi enkulu. I-KosmoTime ikwenza ukuba uhlele imisebenzi yakho kwaye ucwangcise ixesha lokuqinisekisa ukuba iprojekthi inokugqitywa.
Vimba Zonke iziphazamiso Ixesha leKosmo livala iithebhu zakho kwaye licime izaziso zakho zeSlack xa uqala umsebenzi wakho. Nje ukuba ugqibile, iKosmoTime iya kuvula ngokuzithandela zonke iithebhu kunye nezaziso
Yongeza umsebenzi kwiChannel -Ixesha leKosmo likuvumela ukuba wenze i-bookmark kuyo nayiphi na i-URL kwaye uyijike ibe nguMsebenzi ngonqakrazo olunye ukusuka Google Chrome. Ungayabela iSprint kamva kwaye uyenze ngexesha elifanelekileyo, kugxilwe ekunene.
Gcina iKhalenda yakho Ixesha leKosmo lidityaniswa ngqo nekhalenda yakho yeMicrosoft okanye kaGoogle. Yongeza umsebenzi okanye ibhloko yomsebenzi, uyihudule kwikhalenda yakho, kwaye unokwandisa ixesha lokucima ixesha elininzi njengoko ufuna ukufeza umsebenzi wakho.
Iinjongo zeKosmoTime kukwenza ukuba abasebenzisi bafikelele kwimveliso yabo ngokupheleleyo, kwaye kwinkqubo bafumane ulawulo lwexesha labo kunye nenkululeko yabo. s
Bhalisela ixesha leKosmo
tags: ukuthengisa okwakudalauphandoixesha lesosmotmicrosoftulawulo lomsebenziumlawuli womsebenzi
I-Ecommerce yeHlabathi: Ngokuzenzekelayo vs Umatshini vs Abantu ukuGuqulelwa kwendawo
Yiya kumaQhinga kunye neMiceli mngeni kuThengiso lweeholide kwiXesha lePostov